Home News Villa Soomaaliya oo ka carootay wareeysi uu VOA-da siiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka+Maxaa ka...
Villa Soomaaliya oo ka carootay wareeysi uu VOA-da siiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka+Maxaa ka jira khilaaf hoosaadka Kheeyre iyo Mursal
Gudoomiyaha gobolaha shacabka Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan wareeysi uu dhawaan siiyay laanta Af-soomaaliga Ee VOA-da ayuu ku sheegay in aysan ciidamo u baahneeyn Magaalada Baydhabo islamarkaana ay joogaan ciidan ka adag xaqiijinta amniga.
Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay in aysan waqtigaan munaasib aheeyn in Ciidamo loo daabulo Magaalada Baydhabo.
Hadaba iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxaa arintaasi ka hadlay Falanqeeya Arrimaha Siyaasadda iyo amniga oo lagu magacaabo Muqtaar Maxamed Cali,Waxaana uu sheegay in mursal waqtigaan ay u ektahay in khilaaf jira uu dareemay.
Dhanka kale muqtaar waxaa uu xusay in hadalkaasi uu ka careeysiin karo Kabiirka Kooxda NABAD IYO NOLOL,islamarkaana ay suuragal tahay in irdaha laga xirto Gudoomiye mursal.
Wareeysigga uu laanta Af-soomaaliga Ee VOA-da siiyay Gudoomiyaha gobolaha shacabka Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan ayaa si aad ah uga careeysiiyay Villa soomaaliya sida aan xogta ku heleeyno,waxaana jira khilaaf hoose oo kheeyre iyo mursal ka dhex aloolsan
Dowlada Soomaaliya ayaa ciidan boolis ah ku daaduleeysay Magaalada baydhabo,talaabadaasi oo lagu tilmaamay in aan wanaagsaneeynin maxaa yeelay ciidamo xoogan oo amniga sugo waaa ay joogaan Magaaladaasi.
Previous articleGuddoomiye Mursal oo ay maanta hortaallo inuu Noqdo Geesi Barlamanka iyo dalkaba Badbaadiya ama Dabadhilif burburiya labadaba.
Next articleWar Deg Deg ah:-Doorashada K/Galbeed oo mar kale dib loo dhigay
Axmed khayr Cabdi iyo Ms Tine Mørch Smith oo kulan gaar...